Akwụkwọ Alexandra Isenegger na Martech Zone |
Edemede site na Alexandra Isenegger
Alexandra bụ CEO nke Linkilaw. Mmalite dị mkpa siri ike akwụkwọ iwu na ndị ọka iwu na-akwụ ụgwọ ọnụego nzuzu. Linkilaw kpebisiri ike ịkwụsị arụmọrụ, mezie ọrụ iwu & nyere aka ka ọrụ iwu bụrụ ihe ga-enweta. Site na teknụzụ anyị, ngwọta ụlọ na ụlọ ahịa iwu, anyị na-enye ndị mbido usoro B usoro nkwado iwu kachasị ukwuu.
You chọrọ Usoro na Ọnọdụ, Nzuzo na Iwu Kuki?
Sunday, Eprel 30, 2017 Monday, May 1, 2017 Alexandra Isenegger
Nkwukọrịta na azụmahịa azụmaahịa agabigala aka. Nke a bụ eziokwu karịa ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ, na-eji ngwa anyị na-abawanyewanye na ngwa ịntanetị, ma ọ bụ na kọmputa anyị, mbadamba ma ọ bụ ekwentị anyị. N’ihi nnweta ozigbo a banyere ozi ọhụụ, webusaiti ụlọ ọrụ abụrụla ngwa ọrụ maka ngwa ahịa iji nyefee ngwa ahịa ha, ọrụ ha, yana omenaala ha n’ahịa buru ibu. Ebe nrụọrụ weebụ na-enye ndị azụmahịa ohere site na ikwe ka ha rute ma ruo ha aka